Itoobiya waxaa laga baadhey 24kii saac ee ugu danbeyey dadka kor u dhaafaya 1861 qof oo laga baadhayey xanuunka Covid19 waxaana laga helay xanuunkii Ethiopia: Sadex qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka COVID19 marka laga fiiriyo 1,861 tijaabooyin shaybaar 24kii saac ee lasoo dhaafay.
Dhamaan seddexda qof waxay degen yihin AddisAbeba; dhammaan seddexda ma lahan taariikh socdaal, halka 2-na ay leeyihiin raad-raac taabasho oo la xiriira kiis hore; kiiska 3-aad wuxuu marayaa baaritaan.
Laba bukaan oo dheeri ah ayaa sidoo kale soo kabsaday, taasoo ka dhigeysa tirada guud ee soo kabashada illaa iyo hadda 95.
Itoobiya waxay leedahay 194 qof oo qaba xanuunka wadarta guud ee la xaqiijiyey COVID-19 oo 4 ka mid ahi ay dhinteen.
Previous articleAXKAAMTA SOONKA – Dersiga 3AAD
Next articleGuddiga Gurmadka Beledweyne oo beeniyey ballanqaadkii dowladda Soomaaliya iyo jabuuti